How to create own on-the-job learning opportunities
Career Advice Help & Support Management Upgrade Yourself Workplace Success
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ်ပိုင်သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများ ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ
အလုပ်မှာ ကျွန်ုပ်လိုအပ်မည် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အားလုံးကို စာသင်ကျောင်း သို့မဟုတ် အလုပ်သင် ဆီက ရံဖန်ရံခါမျှသာ စီစဉ်ပေးလေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်ခွင် တစ်လျှောက်လုံးမှာ ထူးချွန်ပြီး ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်နေရန်အလိုငှာ ကျွနု်ပ်တို့သည် အတတ်ပညာပိုင်း ကျွမ်းကျင်မှု အသစ်များကို သင်ယူပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် အမြဲပြုလုပ်ရမည်။ သင်၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများထဲမှာ လုပ်ငန်းခွင်သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးဖို့ “၀ိုင်း” (Wynee) မှ အောက်ပါ အကြံပေးချက်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ အဲဒီအရာတွေက အရည်အချင်း အသစ်များ ပျိုးထောင်ဖို့ရာ သင်ကို ကူညီနိုင်ပြီး အဲဒီအရည်အချင်းများက သင့်လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း၏ နောက်ထပ် ခြေလှမ်းများဆီ တွန်းပို့နိုင်မည်။
၁။ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတစ်ခု နေ့တိုင်း ရေးပါ
တစ်နေ့တာ ပြီးဆုံးတိုင်း ခံစားချက်တွေ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ ရယ်စရာကောင်းသော အဖြစ်အပျက်တွေ ပါဝင်ပြီး ဘာတွေ သင် ပြီးမြောက်ပြီးပြီလဲ၊ ဘယ်နေရာမှာ သင် ကြိုးစားရုန်းကန်ရသည်ကိုလည်း မှတ်စုတစ်ခု ပြုလုပ်ပါ။
၂။ တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ
သင်ယူမှုပိရမစ် သီအိုရီ အရ သင်၏ သင်ယူမှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဆွေးနွေးခြင်းသည် အလွတ်ကျက်မှတ်မှု (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းကျော်မျှ သင်၏ မှတ်မိခြင်းကို တိုးလာနိုင်သည်။ သင့်အတွေ့အကြုံများကို သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုဝင် ဒါမှမဟုတ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ယောက်ယောက်နှင့် ဖွင့်ပြောနိုင်သည့် သူကို ရှာပါ။ သူငယ်ချင်း သို့မဟုတ် အကြံပေး ညွှန်ပြသူ တစ်ယောက်ကလည်းပဲ သင်ကိုယ်တိုင် တိုးတက်ရန်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်းအသစ်များကို သိရှိဖို့ နည်းလမ်းအကြံပြုချက်များကို ကူညီနိုင်သည်။
သင်၏ လုပ်ငန်းသက်တမ်း အတွက် ငါးနှစ် နှင့် ဆယ်နှစ် အစီအစဉ်တစ်ခု ဖန်တီးရေးဆွဲပါ။ ပထမဦးစွာ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်များကို ရွေးခြယ်ပါ။ ပြီးနောက် ထိုပန်းတိုင်ဆီ ရောက်မည့်လမ်းကြောင်းမှာ ဖြည့်လိုက်ပါ။ သတိရနေပါ သင်၏ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုက သင်ကိုယ်တိုင်ရော သင်၏လုပ်ငန်းရှင်ကိုပါ ဘယ်လို အကျိုးပြုလိမ့်မလဲဆိုတာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ သင်လျှောက်လှမ်းမည့် လမ်းကြောင်းကို စီစဉ်တာတွေ နှင့် သင်၏လုပ်ငန်းခွင်ကို ပုံဖော်ရာတွင် သင်ကို ကူညီဖို့ များပြားသော မှီငြမ်းစရာများကို “၀ိုင်း” (Wynee) က စီစဉ်ပေးပါသည်။
သငျ၏ လုပျငနျးသကျတမျး အတှကျ ငါးနှဈ နှငျ့ ဆယျနှဈ အစီအစဉျတဈခု ဖနျတီးရေးဆှဲပါ။ ပထမဦးစှာ ရညျရှယျခကျြပနျးတိုငျမြားကို ရှေးခွယျပါ။ ပွီးနောကျ ထိုပနျးတိုငျဆီ ရောကျမညျ့လမျးကွောငျးမှာ ဖွညျ့လိုကျပါ။ သတိရနပေါ သငျ၏ ပညာရပျဆိုငျရာ တိုးတကျမှုက သငျကိုယျတိုငျရော သငျ၏လုပျငနျးရှငျကိုပါ ဘယျလို အကြိုးပွုလိမျ့မလဲဆိုတာ ထညျ့သှငျးစဉျးစားပါ။ သငျလြှောကျလှမျးမညျ့ လမျးကွောငျးကို စီစဉျတာတှေ နှငျ့ သငျ၏လုပျငနျးခှငျကို ပုံဖျောရာတှငျ သငျကို ကူညီဖို့ မြားပွားသော မှီငွမျးစရာမြားကို “ဝိုငျး” (Wynee) က စီစဉျပေးပါသညျ။
Rarely does school or internship provide all of the preparation that we need on the job. Throughout our career, we must constantly be improving and learning new skills in order to excel and remain competitive. Wynee provides the following tips to create on the job learning opportunities in your day-to-day activities that can help you build new capabilities that can propel you to the next steps of your career.
At the end of each day, makeanote of what you have accomplished, where you struggles and include your feelings, happiness, worries and funny stories. This process isapowerful mechanism to reflect on the day and identify potential areas of improvement.
Discuss with someone
According to the pyramid learning theory, discussing your learnings and challenges can increase your retention by 70% over rote memorization. Findafriend, family member, or colleague with whom you can share your experiences. A friend or mentor can also help suggest means to improve yourself and find new solutions.
Identify goals and createaroadmap
Createafive and ten year plan for your career. First pick your end goals, then fill in the path to get there. Remember, consider how your professional improvement will benefit your employer as well as yourself. Wynee providesaplethora of resources to help you map out your career and plan your path!
What are the typical career options in pharmaceutical industry?